Mgbanwe nke Tencent 'Egwuregwu maka Udo' maka PUBG Mobile bụ Nnukwu Ọkụ na China | Gam akporosis
Ndochi 'Game for Peace' nke Tencent maka PUBG Mobile bụ nnukwu ihe ịga nke ọma na China
Tencent, ụlọ ọrụ dị n’azụ egwuregwu ahụ PUBG Mobile, kwuputara n’oge na-adịbeghị anya nnọchi anya PlayerUnknown Battlegrounds (PUBG) nwere egwuregwu akpọrọ "Game for Peace" (wepụtara ka "Game for Peace"). Nke a na-aga China.
Dị ka akụkọ ahụ si kwuo, n'ime nanị 72 awa site na mmalite ya, egwuregwu ahụ malitere ịmepụta ego na zitere karịrị $ 14.
IOSdị iOS nke Egwuregwu maka Udo bụ Top-grossing na ọtụtụ ebudatara free egwuregwu na Apple si Chinese ngwa ahịa, dị ka data Sensor Tower si dị. Tencent, nke bu onye nkwuputa egwuregwu kasịnụ n'uwa site na ego ha nwetara, na emecha weputa ego ha nwetara site na isi njimara ndi mmadu maka agha agha royale.
Tencent dara ego na China site na ụdị mkpanaka nke egwuregwu PUBG n'ihi usoro igbu oge na nchịkwa gọọmentị na ọdịnaya. Ya mere, ụlọ ọrụ ahụ mechiri aha ebe ahụ n'izu gara aga wee bido 'Game for Peace' ọhụrụ.
Egwuregwu maka Udo nwere egwuregwu yiri ya yana na-enye ndị ọrụ ohere ịkwaga data PUBG Mobile ha na akpaghị aka. Tencent natara nnwapụta iji nweta ego site na aha ọhụrụ site n'aka ndị na-achịkwa ọnwa gara aga, nke pụtara na ndị ọrụ nwere ike ịzụta akpụkpọ anụ na ihe ndị ọzọ dị n'ime egwuregwu ozugbo ha malitere igwu egwu.
Na mgbakwunye na njikwa iwu, China machibidoro ọdịnaya ime ihe ike, mmekọahụ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'ọtụtụ nyiwe, site na TV na egwuregwu vidio. Dị ka isi nye mkpọsa gọọmentị iji kpuchido ahụike ụmụaka na igbochi egwuregwu riri ahụ, Egwuregwu maka Udo bụ naanị maka ndị egwuregwu gbara afọ 16 na karịa.
PUBG Mobile na-anwale mmachi oge elekere egwuregwu kwa ụbọchị na ụfọdụ mba
N'aka nke ọzọ, ụlọ ọrụ ahụ ekwuola na nkwupụta na ọ ga-ejedebe oge ịgba egwu na awa abụọ kwa ụbọchị. Dabere na nkọwa nke egwuregwu na weebụsaịtị, Game for Peace na-asọpụrụ ndị Air Force nke ndị mmadụ nnwere onwe agha na-agbachitere mpaghara nke mba ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Ndochi 'Game for Peace' nke Tencent maka PUBG Mobile bụ nnukwu ihe ịga nke ọma na China
Play Games ugbu a bụ n'ezie jụụ n'ihi na ọ na-achịkwa akara maka gam akporo egwuregwu